ILa Maison des Vignes, indlu yamatye yabucala evalelweyo - I-Airbnb
ILa Maison des Vignes, indlu yamatye yabucala evalelweyo
ILa Maison des Vignes, indlu evaliweyo enamagumbi amabini okulala ebekwe ngaphezulu kwesiqingatha seehektare zeegadi kwaye ijonge kwichibi labucala, yeyona ndawo ifanelekileyo yokonwabela iholide kumaphandle aseFransi.
Umgangatho ophantsi wendlu, ozaliswe ngumlingiswa ngendlela yemithi ye-oki yasekuqaleni kunye neendonga zamatye, zinekhitshi enkulu / isidlo sakusihlwa, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela / indlu yangasese / igumbi lokuhlambela. Izinyuko zamaplanga zikhokelela kumgangatho wokuqala, apho uya kufumana amagumbi amabini okulala-amagumbi amabini kunye namawele.
Igadi, ejikeleze indlu kwaye ingahoywa, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye ukonwabele ukuhlala ngaphandle kwesiFrentshi. I-Apéro kunye nesidlo sangokuhlwa phantsi kweenkwenkwezi yeyona ndlela ifanelekileyo yokuba ungekho ngokuhlwa. Yaye ngaphandle kongcoliseko lokukhanya konke konke, isibhakabhaka sasebusuku ngokwenene singumbono onokusibona.
Ikwayeyona ndawo ifanelekileyo yokubona izilwanyana zasendle zalapha (i-orioles egolide, i-buzzards, i-pine martens, i-herons, i-woodpeckers kunye ne-deer zezinye zezilwanyana zasendle ezikhe zabonwa apha), okwenza le gîte ifanelekele ababukele iintaka kunye nabathandi bendalo ngokufanayo!
Ungajikeleza ukuya kwi-dépot de pain ekufutshane ukuze uthathe idosi yakho yemihla ngemihla yesonka saseFransi kunye neecroissants (okanye ingaphantsi kwemizuzu emi-5 emotweni). Kungenjalo, yimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba ukusuka eLa Maison des Vignes, kwilali edumileyo yaseSainte-Sévère-sur-Indre, apho umboniso bhanyabhanya kaJacque Tati uJour de Fête wadutyulwa, kukho i-boulangerie, iindawo zokutyela ezimbini, ivenkile yokutya, i-tab. , unosilarha, ikhemesti kunye neentlobo ngeentlobo zeevenkile ezincinci.
Kutheni ukhetha iLa Maison des Vignes?
Uya kuphangwa ukuze ufumane iindawo zokuphumla kwaye ukonwabele le ndawo yoxolo emangalisayo. Jonga izilwanyana zasendle ukusuka kumda wechibi ezantsi kwegadi, lala phantsi komthunzi weparasol okanye ukhethe iidiliya ezimbalwa kumqolo wemidiliya egadini-okanye umdiliya ojinga phezu komnyango wangaphambili- ukhetho lolwakho.
Xa ufika, uya kufumanisa ukuba indlu ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo kwiholide yokuphumla neyonwabileyo. Kukho i-WiFi, zombini i-TV yesiNgesi kunye nesiFrentshi, imidlalo yebhodi emininzi kunye neencwadi, i-BBQ kunye neetafile zepingpong kunye ne-babyfoot eshedini. Ilinen kunye neetawuli zikwakhona.
Uya kufumana iBhaskithi yoKwamkeleka eLuxury ikulindile ukuba ubhukishe ubusuku obu-7 okanye ngaphezulu, izaliswe yiyo yonke into oyifunayo kwisidlo sakusasa sakho sokuqala, kubandakanya isonka esitsha, iicroissants kunye nebhotile yewayini ehlwahlwazayo! Kwiindwendwe zethu ze-vegan, sikwabonelela ngeBhaskithi yolwamkelo lwe-Vegan-elula i-Luxury-sazise ukuba ufuna i-vegan ukhetho xa ubhukisha.
Kwaye, njengoko indlu ikumda wesebe le-Indre kunye neCreuse (kwaye ngokwenene i-Center-Val de Loire kunye nemimandla yaseNouvelle-Aquitaine), zininzi izinto onokuzenza kunye neendawo zokuzibona!
Ukuba unokuzikrazula, indawo yendawo inikezela ngemisebenzi emininzi, ukusuka kwiikhenketho zewayini ukuya kwimidlalo yamanzi.
Ukhenketho lwewayini - iGoûts du Berry inikezela ngeendwendwe zewayini kwi-AOC Chateaumeillant yasekhaya (imizuzu engama-20 ukuya kude - baya kukulanda ukusuka eLa Maison des Vignes, ngoko akukho mfuneko yakuba nexhala malunga nabaqhubi abachongiweyo!), Apho uya kufumana ukuzama indawo emnandi ye-rosé gris, kunye nokhenketho olukude ukuya eSancerre, eReuilly naseQuincy.
Landela emanyathelweni abanye babapeyinti abadumileyo behlabathi, ababhali kunye nabalawuli-umbhali ongumFrentshi uGeorge Sand wayehlala e-Indre kwaye unokundwendwela indawo yakhe, esemantla eLa Châtre. I-Vallée des Peintres, ehlala rhoqo yi-Monet kunye ne-Detroy, kuquka iidolophana zaseGargilesse (enye ye-Plus Beaux Villages de France) kunye ne-Crozant, ifikeleleka lula kwindlu (ejikeleze i-30 imizuzu yokuhamba).
I-Sainte-Sévère-sur-Indre, yimizuzu emi-5 kuphela xa uqhuba ukusuka endlwini, kulapho ifilimu kaJacque Tati ethi Jour de Fête yadutyulelwa khona-uya kufumana iziko labatyeleli apha kwaye kukho imisitho eyahlukeneyo ebanjwa kulo lonke ihlobo.
Imidlalo yasemanzini-Indawo izaliswe ngamachibi okuzonwabisa (agqibelele kwimini eshushu yasehlotyeni), apho unokuthatha inxaxheba kuyo yonke into ukusuka ekukhweleni ibhentshi ukuya kwiphenyane ukuya kwi-zip wiring! Elona chibi likufutshane neLa Maison des Vignes lingaphantsi kwemizuzu eli-10 xa uhamba kwaye lixhotyiswe nge-téléski nautique-inkqubo entsha enentambo ejikelezayo yeemitha ezingama-525 etsala abatyibilizi bamanzi/abavusa abantu echibini. Kukwakho nolwandle, igalufa yeFrisbee, umkhondo we-BMX kunye neebhentshi ezininzi zepikiniki zabo bafuna ukuhlala bomile.
I-Lac de Sidiailles eyaziwayo, i-20 imizuzu kuphela yokuqhuba, yindawo efanelekileyo yepikiniki kwaye inika uluhlu olubanzi lwemisebenzi equka i-adventure yesebe (efana ne-GoApe) kunye namava e-zip wire ejikeleze ichibi!
I-Pays des 3 Lacs ikwangaphakathi komgama olula wokuqhuba.
Igalufa kunye ne-Spa- Kuphela yimizuzu embalwa yokuqhuba ukusuka endlwini yindawo yegalufa iLes Dryades (6120m - 20078ft). Kwabo bangawonwabeli umdlalo, kukwakho nespa ehotele.
Ukuloba - iCreuse ineehektare ezingaphezulu kwama-3000 zamachibi namadama kunye neekhilomitha ezingama-3800 zemilambo nemisinga, iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzonwabisa kwindawo yokuloba.
Iilwandle - Kukho amachibi angenakubalwa anamalwandle anesanti ngaphakathi komgama wokuqhuba lula wendlu. Ulwazi oluthe kratya malunga nazo zonke ezi zinto luya kunikwa xa ufika.
Ukukhwela ibhayisekile/ukuhamba/ukukhwela ihashe-Indawo yasemaphandleni eqengqelekayo yenza le ndawo ifanelekele abathanda ukukhwela ibhayisekile nabahambi ngokufanayo. Ukuba uzisa iibhayisekile zakho, kukho indawo ekhuselekileyo yokuyigcina kwisisele esijongene nendlu. Kukho neebhayisekile endlini kakade. Iimephu zasekuhlaleni ziyafumaneka ukuba uziboleke. Unokuhamba ukhwele ihashe emaphandleni kwindawo eyi-10 imizuzu yokuqhuba.
Iindawo zokutyela-enoba ukhetha i-haute-cuisine okanye isiko lokupheka isiFrentshi ekhaya, uya kuphangwa ukuze ukhethe indawo oza kutyela kuyo. Izinto ezikhethekileyo zale ndawo azifanelanga ukuphoswa- ngakumbi i-pâté aux pommes de terre kunye newayini ebomvu kunye ne-rosé gris yendawo. Uluhlu lweendawo zokutyela kunye namaxesha azo okuvula ziya kufumaneka endlwini.
Iimarike-Chola imveliso yasekhaya ngaphambi kokuba uhlale ngasemva kwaye wonwabele iglasi yewayini kwithambeka letab yendawo. Uluhlu olupheleleyo lweemarike zasekuseni nangokuhlwa ziya kufumaneka xa ufika. Sikwabonelela ngoluhlu lwee-vide greniers zasekhaya (brocantes) endlwini.
Iidolophu zasekuhlaleni-Idolophu ephithizelayo yaseLa Châtre, enezikwere zentengiso kunye neendawo zokutyela ezihamba ngeenyawo, kukuhamba imizuzu engama-20 kuphela. I-Boussac ikwafanelekile ukutyelelwa ngosuku lwentengiso (ngoLwesine kusasa). I-Les Pierres Jaumâtres (i-40 enkulu - kwaye engaqondakaliyo - iibhloko zegranite) kunye neToulx Sainte-Croix, kunye nemibono yayo ye-360 degree yamasebe asi-7 (Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Puy-de-Dôme, Allier, Cher kunye ne-Indre) zingaphakathi kwemizuzu embalwa yokuqhuba ukusuka eBoussac.
I-Aubusson kunye neendawo zayo ezidumileyo (ngoku ezivunyiweyo yi-UNESCO) zikwakuhambo lweyure nje ukuya.
Ukunyuka kwamatye kunye nokubhabha - Kwi-Monts de Guéret, i-45 ngomzuzu wokuhamba ukusuka kwindlu, unokuloba, ukunyuka kwamatye kunye ne-paraglide (indlela enkulu yokuthatha iimbono).
ILabyrinth Géant, eyona maze yezityalo esisigxina emhlabeni, ikwakufuphi.
Abathandi bendalo-Kumgama othe qelele, malunga neeyure zokuhamba ukusuka endlwini, uya kufumana ipaki yendalo yaseLa Brenne. Ngamachibi angama-3,000, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubona uluhlu olubanzi lweentaka kunye nezilwanyana zasendle ukusuka kwiindawo zokujonga simahla zokufikelela. Ikwalikhaya le-Cistudes, i-European Pond Terrapins, onokuthi uyibone rhoqo ilanga litshiswa kwizigodo!
Uya kuba nemfihlo epheleleyo yokuphumla kwaye ujabulele iholide yakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho, zikhululeke ukuqhagamshelana ngeenkcukacha zoqhagamshelwano ezinikezelwe endlwini.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sazeray